Maungtintyin: သင်ရဲ့အတွင်း မာရ်နတ်ကို တွန်းလှန်ပယ်ရှားပါ
လူသားသတ္တ၀ါများဟာ မိခင်မြေကမ္ဘာကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ သင့်ကို ဒီနေရာမှာ မွေးဖွားပြီး သင်ဟာ ဒီဂြိုလ်ပေါ်မှာ ရှင်သန်ဖို့ လေ့လာသင်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အရာရာကို အနိုင်ယူ သိမ်းပိုက်စိုးမိုးနိုင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ စိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုကို ခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လူသားသတ္တ၀ါဟာ အမြင့်မားဆုံးတောင်ထိပ်ကို တက်ပြီးပြီဆိုတာ၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်အနက်ဆုံးကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီးပြီဆိုတာကို ဂုဏ်ယူမော်ကြွားနေကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်တီထွင်မှုများဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ငှက်ကဲ့သို့ ပျံသန်းနိုင်ကြပါတယ်။ ငါးထက်လျင်မြန်စွာ ကူးခတ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ရေအောက်မှာ အသက်ရှင်သန်လျက် ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။
လူသားဟာ လမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လမ်းတောင် လျှောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားသတ္တ၀ါများအနေဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာရော အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝန်းကျင်ကမ္ဘာမှာပါ ငြိမ်းချမ်းရေး မရကြသေးပါဘူး။ တကယ်တော့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကြောင့်ကြဗျာပါရစိတ်များ ဖိအားများ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းအောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတွင်းအတ္တနဲ့ အပြင်းအထန်အားပြိုင်နေကြရပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ဘ၀များကို ကြည့်ရှု့ကြည့်မယ်ဆိုယင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝန်းကျင်ကမ္ဘာနဲ့ စစ်ပွဲများ ဖြစ်လုနီးပါး ရှိနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ globalisation နဲ့ ပတ်သက်လို့ စကားလက်ဆုံကျနေကြပြီး နယ်နိမိတ်မရှိတော့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုကို အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ချိန်ရွယ်ရည်မှန်းနေကြပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သဘောထားသေးသိမ်စွာ အရေးမပါလှတဲ့အသေးအဖွဲ့များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြတ်အစွန်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ အပူမီးတောက်နေကြရပါတယ်။
ဒီပြဿနာများကို အဖြေရှာဖို့အတွက်ကတော့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပုံစံကျနေတဲ့အမြင်, ပုံသေအတွေးအခေါ်, အလေ့အထများကို ပြောင်းလဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ အလိုဆန္ဒတွေကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် မွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့ သံသရာမှ လွန်မြောက်နိုင်တယ် - ဆိုတာကို မိန့်မြွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားရဲ့အလိုဆန္ဒကို ပယ်သတ်နိုင်, ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ အဖန်ဖန်လေ့ကျင့်ခြင်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်များကို သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးများနဲ့ အကျွန်ုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖြစ်တည်ခြင်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှုများမှတဆင့် လွတ်မြောက်မှုရဲ့အခြေအနေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်စေကာမူ အဲဒီအတွေးများနဲ့အလိုဆန္ဒများမှ လွတ်မြောက်စေဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ အဲဒါတွေကို ပထမဆုံး သိရပါ့မယ်။ ဒီနည်းလမ်းစည်းစနစ်များဖြင့် နာကျင်မှုဝေဒနာများကို အဆုံးသတ်စေပြီး စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရှေးဦးလူသားမှ ခေတ်သစ်လူသားအထိ - အဲဒီနောက် သမိုင်းမတင်မီကာလ ဂူအောင်းလူသားမှ ယဉ်ကျေး ထွန်းကားတဲ့လူသားအထိ - ယဉ်းကျေးတိုးတက်လာခြင်းအပေါ် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အဆိုများ- အဆင့်ဆင့်ပြောင်း လဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြောဆိုချက်များ ရှိစေကာမူ- ကမ္ဘာကြီးဟာ အတွင်းမှာ နေထိုင်ဖို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာ ဖြစ်လာနေပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြောင်းများစွာကို မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က ကမ္ဘာ့နယ်ပယ်အားလုံးရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ တောင့်တလိုလားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တရားလွန်လွန်ကဲပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက သူ့ရဲ့အမိန့်စာချွန်လွှာဟာ တကမ္ဘာလုံးကို ရိုက်ခတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနောက် သူဟာ ပျင်းရိလာပြီး လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိ ဖြစ်လာပါတယ်။
လူဟာ အခြားမျိုးစိတ်များထက် ဆိုးသွမ်းရက်စက်ပါတယ်။ ပိုလို့ သေသိမ်နိမ့်ကျပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူသားဆန်တာထက် များစွာပိုတဲ့ လူသားဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့က ကျော်လွှားဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဒေါသ,အတ္တ, လောဘ, အမုန်းတရားနဲ့ မနာလိုခြင်းကဲ့သို့သော ဆန့်ကျင်ဘက် အရည်အသွေးများ အကျွန်ုပ်တို့မှာ ရှိပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသဲစွဲ ဖြစ်လာဖို့ အဲဒီအရည်အသွေးများကို လက်ခံခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စွမ်းနိုင်သည်ထက် ပိုမိုအင်အားကြီးမားတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ ငယ်ငယ်ဘ၀က ဖတ်ခဲ့ဖူးပြီးတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်းများထက် ထိထိရောက်ရောက် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘာကိုမဆို အကျွန်ုပ်တို့က ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ အထင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီကမ္ဘာဂြိုလ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ရှိ သက်ရှိအားလုံးကို ပျက်ပြုန်းဖို့ စွမ်းနိုင်တဲ့ အလုံးအရင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ လက်နက်များကို ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်း လူသားများကို လက်နက်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လက်များမပါဘဲ လူအများကို တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ ဒီအရာအားလုံးက ၀မ်းနည်းပူဆွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ဝေဒနာများဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ ဘာ့ကြောင့် ရင်ဖွင့်နေကြတာလဲ?
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခံစားတတ်မှုအာရုံများမှ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမျက်ဒေါသကို လွှဲပြောင်းယူခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့က အဲဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်တော့မှ လောင်ကျွမ်းလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ချထားပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တကို ကျေနပ်စေဖို့ တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ စွဲလမ်းခြင်းဥပါဒါန်က သူကိုယ်တိုင်နှင့်အတူ အရာရာကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့၊ သူ့ရဲ့ လောဘကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ သူ့ကို တွန်းအားပေးပါတယ်။
ယနေ့ စီးပွါးဥစ္စာတစ်ခုတည်းက လူသားရဲ့ God ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်အတွင်းရှိ မလိုတမာစိတ်က ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်စေပါဘူး။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဓိကအားဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပါဝါများကို သက်သေပြဖို့ တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ အိပ်ယာမှနိုးထတဲ့အခါ မနက်မိုးလင်းတိုင်း ဆုတောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါပြီးတဲ့နောက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်နေ့လုံး သားကောင်ကို ရှာဖွေကြပြန်ပါတယ်။
အိန္ဒိယတစ်ယောက် ဆုမွန်တောင်းတဲ့ ဆုတောင်းခြင်းများက ငြိမ်းချမ်းဖို့ တိုင်တည်ခြင်းများနှင့် အဆုံးသတ်ကြတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ “Om Sahnti, Shanti ” ထာဝရဘုရားသခင်! ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ! နေရာတိုင်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ!
အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘာ့ကြောင့် စစ်အတွက် ငိုကြသလဲ?
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရန်အတွက် ငြိမ်သက်တည်ငြိမ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒေါသကို ရင်ဆိုင်လျှက် စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရပါ့မယ်။ လောဘကို ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်လျှက်…မသိခြင်းကို ဆန့်ကျင်၍ စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရပါ့မယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ငြိုးမာန်ဖွဲ့ခြင်းက ဘယ်တော့မှ အကျိုးကျေးဇူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ရပါမယ့်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လက်စားချေလိုခြင်းရဲ့ ခံစားချက်ကို ထိန်းဖို့ သင်ယူရပါ့မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တင်တိမ်ရောင့်ရဲခြင်းကို သင်ယူရပါ့မယ်။
ချမ်းသာခြင်းဟာ ဆိုးဝါးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုမဟုတ်သလို ဆင်းရဲခြင်းဟာလည်း ဆဲရေးတိုင်ထွာတဲ့စကားတော့ မဟုတ်ပါ။ လူများဟာ ချမ်းလည်းချမ်းသာနိုင်တယ်။ ဆင်းလည်းဆင်းရဲနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများဟာလည်း နည်းပါးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေနဲ့လိုက်၍ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကို လေ့လာသင်ယူထားမယ်ဆိုယင် သူတို့ဟာ သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ မနာလိုမှုများကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပျော်ရွှင်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကို မေ့ထားဖို့ သင်ယူရပါမယ့်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အတွင်းမှာ ပုန်းရှောင်နေတဲ့မာရ်နတ်ကို ရင်ဆိုင်ပြီး ဆင်နွှဲဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်သင့်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွင်းကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းအောင် သင်ယူသင့်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်များအကြား ကြည်နှုးပျော်ရွှင်မှုများကို ဖြန့်ဝေသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့အတ္တရဲ့ သန်မာကြံ့ခိုင်တဲ့ကြွက်သားအကြောအမျှင်များကို ကျေနပ်စေဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သန္နိဋ္ဌာန် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, November 24, 2010